Ny lahatsoratr'i Tim Krozek momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Tim Krozek
Tim Krozek no CEO an'ny Boost Media, ny tsenan'ny famoronana doka niomerika.
Talohan'ny Boost Media, Krozek dia tompon'andraikitra tamin'ny fidiram-bola eraky ny Efficient Frontier sy ny fividianana mpanjifa. Nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny ekipa 15 olona tany am-boalohany izy ho an'ny mpiasa 220 ary vola mitentina 40 tapitrisa dolara mahery. Ny Frontier mahomby dia ho azon'ny Adobe (NASDAQ: ADBE). Izy koa no nitantana ny varotra maneran-tany an'ny Sales.com sy ny fampandrosoana, ny fitantanana ny programa ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Taty aoriana dia nitantana ny ezaka fitadiavam-bolan'ny Flite.com ho an'ny marika, maso ivoho ary orinasan'ny mpanonta izy.
Zavatra 3 hodinihina amin'ny fanovana doka an-tsoratra amin'ny Google Text
Alatsinainy, Septambra 12, 2016 Talata, Septambra 13, 2016 Tim Krozek
Ny doka an-tsoratra (ETA) nitarin'i Google dia mivantana amin'ny fomba ofisialy! Ny endrika doka vaovao sy maharitra finday voalohany dia mipaka any amin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'ny endrika doka mahazatra mahazatra momba ny birao - saingy mandritra ny fotoana fohy ihany. Manomboka amin'ny 26 Oktobra 2016, tsy afaka mamorona na mampakatra doka an-tsoratra mahazatra intsony ny mpanao dokambarotra. Amin'ny farany, ireo doka ireo dia hanjavona ao anatin'ny tantaran'ny fikarohana karama ary hanjavona tanteraka ao amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana anao. Google dia nanome mpanao dokam-barotra